Al-Shabaab oo isaga baxay deegaanno ka tirsan Mudug & Wararkii ugu dambeeyay +SABAB! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo isaga baxay deegaanno ka tirsan Mudug & Wararkii ugu dambeeyay...
Xarardheere (Halqaran.com) – Ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen deegaanno ka tirsan Gobolka Mudug, sida Saraakiil ay sheegeen.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka ayaa Warbaahinta Dowladda u sheegay in maleshiyaadka Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaannada Deeqlo iyo Maraale oo hoostaga degmada Xarardheere ee gobolka Mudug, kadib markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Mareykanka ay deegaannadaas duqeymo ka fuliyeen.
Waxay kaloo saraakiishu sheegeen, in ay halkaasi isaga carareen xubnihii Shabaabka ee joogay, kadib cabsi xoog leh oo soo wajahday.
Saraakiisha Ciidanka xoogga dalka ayaa intaasi ku daray, in deeganadaasi iminka ay yihiin kuwa cidlo ah oo aysan jirin cid joogta.
Ilaa iyo hadda ma jirto ilo ka madax banaan Saraakiisha dowladda Federalka Soomaaliya oo xaqiijinaysa warka ku saabsan inay isaga baxeen deegaano ku yaallo Koonfurta Gobolka Mudug.
Ururka Al-Shabaab ayaa awood Militari waxa ay ku leeyihiin deeganada hoostagga Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Al Shabaab isaga baxay
deegaanno ka tirsan Gobolka Mudug